ကုမ္ပဏီအချက်အလက် | ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း | Samsung Myanmar
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် တန်ဖိုးများ
ဦးဆောင်နေသော ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီအဖြစ်
တာဝန်သိစွာ လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိ။
ဦးဆောင်နေသော ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီအဖြစ် တာဝန်သိစွာ လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိ။
Samsung သည် ဒေသန္တရ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လေးစားလိုက်နာရန်အပြင် ဝန်ထမ်းအားလုံးပေါ် တင်းကျပ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်စည်းကမ်း ကျင့်သုံးရန် ကတိပြုပါသည်။ ကျင့်ဝတ်ညီသော စီမံခန့်ခွဲရေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြန်ဆန်သော ပြောင်းလဲမှုများအတွက် တုံ့ပြန်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုသာမကဘဲ သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့် ဒေသန္တရ အသိုက်အဝန်းများ အပါအဝင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများစွာနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက်လည်း လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ကမ္ဘာကြီးတွင် ကျင့်ဝတ်အညီဆုံး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၊ Samsung သည် မျှတပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာသော ကော်ပိုရိတ် စီမံခန့်ခွဲရေးကို ကျင့်သုံးရင်း ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများကို မပြတ် လေ့ကျင့်ပေးရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကို အသုံးပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရည်မှန်းချက်နှင့် ချဉ်းကပ်နည်း
Samsung သည် ပိုကောင်းသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ဆောက်ရန် အဆင့်မြင့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးရေးအတွက် ၎င်း၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာကို ပေးအပ်မြှုပ်နှံမည်ဆိုသည့် ရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်း အယူအဆကို ကျင့်သုံးပါသည်။ ဤသို့ဖြစ်မြောက်စေရန် Samsung သည် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းနှင့် နည်းပညာများအတွက် မြင့်မားသော တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
1. လူအများအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာစေဖို့ ပံ့ပိုးကူညီပေးသည်
လူသားရင်းမြစ်နှင့် နည်းပညာများကို အခြေခံ၍
· စီမံခန့်ခွဲရေးမူများဖြင့် လူသားရင်းမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် နည်းပညာ အဆင့်မြင့်မှုကို တစ်ဆင့်တက်အောင် လုပ်ပါ
· လူသားရင်းမြစ်များနှင့် နည်းပညာများဖြင့် စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ် တစ်ခုလုံး၏ စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုရလဒ် ထိရောက်မှုကို တိုးမြှင့်ပါ
2. ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းတွင်း ရည်ရွယ်ချက်များ
အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖန်တီးပါ
· သုံးစွဲသူများကို စိတ်ကျေနပ်မှုအကောင်းဆုံး ပေးစွမ်းသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဖန်တီးပါ
· ကမ္ဘာကြီးတွင် ဤလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအတွက် နံပါတ် 1 အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါ
3. Samsung ကို ကျော်လွန်၍
· အများအကျိုးနှင့် ကြွယ်ဝသော ဘဝဖြစ်ရေးအတွက် ကူညီပေးပါ
· အသိုက်အဝန်းမှ အဖွဲ့ဝင်များ၏ ရည်မှန်းချက် ကြေညာချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ
Samsung ၏ စိတ်ဝိညာဉ်ကို သတ်မှတ်ပေးသည့် တန်ဖိုး
ခိုင်မာသော တန်ဖိုးများဖြင့် ရှင်သန်ခြင်းက လုပ်ငန်းကောင်းအတွက် အဓိကကျသည်ဟု Samsung က ယုံကြည်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ တင်းကျပ်သော လုပ်ငန်းစည်းကမ်းနှင့်အတူ အဆိုပါ အဓိက တန်ဖိုးများသည် ကုမ္ပဏီက ချမှတ်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းအတွက် အဓိကကျပါသည်။
ရိုးရိုးလေးပါပဲ၊ ဝန်ထမ်းရှိမှ ကုမ္ပဏီရှိတာပါ။ Samsung တွင်
ထူးချွန်မှုအတွက် အလျှော့မပေးသော ဝါသနာပြင်းပြမှုနှင့်
စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်များနှင့်
ကတိပြုမှုက Samsung တွင် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်သည့် အရာအားလုံးကို
ဦးတည်စေရန်အလို့ငှာ စျေးကွက်လိုအပ်ချက်များနှင့် ဝယ်လိုအားများကို ကြိုတင်မျှော်မှန်းရင်း အနာဂတ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးအမြင်များကို
ကျင့်ဝတ်ညီသော နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်း၏ အခြေခံအုတ်မြစ် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ကိုင်သည့် အရာအားလုံးအား မျှတမှု၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကို လေးစားမှုနှင့် ပြည့်စုံသော
Samsung သည် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ၎င်း၏
ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဖြစ်လာရေးအတွက် ကတိပြုပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် Samsung Electronics သည် ကော်ပိုရိတ်လူမှုတာဝန်အတွက် ၎င်းတို့၏ ကတိကဝတ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသမှုအဖြစ် 2005 တွင် “Samsung လုပ်ငန်းမူငါးခု” ကို ကြေညာခဲ့သည်။ ဥပဒေနှင့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီ ၎င်းတို့၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစည်းကမ်းအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကော်ပိုရိတ်လူမှုရေး တာဝန်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးမှုအဖြစ် အသုံးချပါသည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေများနှင့် ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦးချင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် မတူကွဲပြားမှုကို လေးစားပါသည်။
လူအများ၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို လေးစားလိုက်နာပါသည်။ အဓမ္မလုပ်သား၊ လုပ်အားခ တလွဲသုံးစားခြင်းနှင့် ကလေးကျွန်ပြုမှုတို့ကို မည်သည့်အခြေအနေတွင်မျှ ခွင့်မပြုပါ။ နိုင်ငံသား၊ လူမျိုး၊ လိင်၊ ဘာသာရေး၊ အစရှိသည်တို့ကို ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို သုံးစွဲသူများ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများကဲ့သို့ ဆက်ဆံပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်း ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ မျှတစွာ ယှဉ်ပြိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဒေသန္တရ အသိုက်အဝန်းများ၏ စည်းမျဉ်းအားလုံးကို လိုက်နာပါသည်၊ စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှု အစီအစဉ်ကို လေးစားပြီး မျှတသောနည်းလမ်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ပါသည်။ ဆိုးရွားသော အရောင်းအဝယ် ကျင့်ဝတ်များမှ ဥပဒေနှင့်မညီသော နည်းလမ်းများဖြင့် မမျှတသော အကျိုးအမြတ်များ မပြုလုပ်ပါ။ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ကိုင်နေစဉ် လူအများကို ကျွန်ုပ်တို့က နစ်နာကြေး လက်ဆောင်များ၊ လာဘ်ထိုးမှုများ မပေးပါ သို့မဟုတ် မယူပါ သို့မဟုတ် ကျွေးမွေးပြုစုခြင်း မပြုပါ။
တိကျသော ငွေစာရင်း မှတ်တမ်းများဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသော ငွေစာရင်းကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုသည့် ငွေစာရင်း စံနှုန်းများအပြင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်း၏ စာရင်းအင်း စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ကြောင်း ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး ရှင်းလင်းစွာ နားလည်နိုင်စေရန် ငွေလွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က တိကျစွာ မှတ်တမ်းတင်ပြီး စီမံခန့်ခွဲပါသည်။ ဥပဒေဖြင့် ပြဠာန်းထားသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့က ကုမ္ပဏီ အချက်အလက်များနှင့် ကုမ္ပဏီတွင် ငွေကြေးပြောင်းလဲမှုများကဲ့သို့ စီမံခန့်ခွဲရေး၏ အဓိကကဏ္ဍများအတွက် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုမရှိဘဲ ကြားနေဝါဒကို လက်ကိုင်ထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က လူတစ်ဦးချင်း၏ နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးများနှင့် နိုင်ငံရေး ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လေးစားပြီး ကုမ္ပဏီအတွင်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်ပါ။ ကုမ္ပဏီ၏ ငွေကြေးများ၊ ဝန်ထမ်းအင်အား၊ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးမပြုပါ။
2. ကျွန်ုပ်တို့က သန့်ရှင်းသော အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်
လူတစ်ဦးချင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့် အများဆိုင် ဘဝကို လုပ်ငန်းဆောင်တာအားလုံးနှင့် သီးခြား တင်းကျပ်စွာ ခွဲထားသည်။
ကုမ္ပဏီနှင့် လူတစ်ဦးချင်းကြား ကွဲလွဲမှုဖြစ်သည့်အခါ ကုမ္ပဏီ၏ ဥပဒေရေးရာ အကျိုးစီးပွားကို ဦးစားပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် အနေအထားကို အသုံးပြု၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကျိုးစီးပွားများကို ထောက်ခံအားပေးခြင်း မပြုဘဲ ကုမ္ပဏီ၏ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများကို တလွဲသုံးခြင်း သို့မဟုတ် အလွဲသုံးစွာလုပ်ခြင်းကဲ့သို့ မသင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်မှုများတွင် မပါဝင်ပါ။ တရားဝင် ရယူထားသော အချက်အလက်ကို အသုံးပြု၍ စတော့ရှယ်ယာများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းကဲ့သို့ စျေးကွက်တင်နိုင်သော အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များကို အရောင်းအဝယ်မလုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့က ကုမ္ပဏီနှင့် အခြားလူများ၏။ အသိဉာဏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး လေးစားပါသည်။
ကြိုတင်၍ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြုချက် မရှိဘဲ အသိဉာဏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်က ကုမ္ပဏီပြင်ပသို့ မရောက်သွားရပါ။ အခြားလူများ၏ အသိဉာဏဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းကို လေးစားပြီး ခွင့်ပြုချက်ရမထားသော အသုံးပြုမှု၊ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဖြန့်ဝေမှု၊ ပြောင်းလဲမှုများ၊ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ ချိုးဖောက်မှုလုပ်ရပ်များတွင် မပါဝင်ပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသော ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပါသည်။
အခြေအနေကောင်းသော သက်တူရွယ်တူဆက်ဆံရေးများအား ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် အပြုအမူများဖြစ်သော လိင်ပိုင်းနှောင့်ယှက်မှု၊ ငွေကြေး လွှဲပြောင်းမှုများ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုတို့ကို ခွင့်မပြုပါ။ အုပ်စုအတွင်း သဟဇာတမဖြစ်ဘဲ သင်းကွဲစေသည့် အုပ်စုဂိုဏ်းများ မဖွဲ့ပါ သို့မဟုတ် သီးခြားအုပ်စုများကို မဖွဲ့စည်းပါ။
3. ကျွန်ုပ်တို့က သုံးစွဲသူများ၊ ရှယ်ယာရှင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကို လေးစားပါသည်
သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်ရေးက ကျွန်ုပ်တို့၏ ထိပ်တန်း ဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ ပြည့်မီသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူများနှင့် ရိုးသားရင်းနှီးသော ဆက်ဆံရေး ရှိပြီး အကြံပြုချက်များနှင့် တိုင်ကြားချက်များကို ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် လက်ခံပါသည်။ ထို့အပြင် သတင်းအချက်များကို လေးစားမှုဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ရှယ်ယာရှင် တန်ဖိုး ဗဟိုပြု စီမံခန့်ခွဲရေးကို လက်ကိုင်ထားပါသည်။
ကျိုးကြောင်းညီသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ထိရောက်မှုဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များထံ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားများ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တည်မြဲသော စီမံခန့်ခွဲရေး ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် ပုံမှန် အကျိုးစီးပွားများကို ဖန်တီးပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စျေးကွက်တန်ဖိုးကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ အခွင့်အရေးများ၊ ကျိုးကြောင်းညီသော တောင်းဆိုချက်များနှင့် စိတ်ကူးများကို လေးစားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ထမ်းများ၏ ‘ဘဝအရည်အသွေး’ တိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးစားပါသည်။
ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် တန်းတူညီသော အခွင့်အလမ်းပေးပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်နိုင်စွမ်းများနှင့် စွမ်းရည်နှင့်အညီ မျှတစွာ ဆက်ဆံပါသည်။ ဝန်ထမ်းများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကိုယ်တိုင် တိုးတက်ရေးကို အကြံပြုပြီး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်သော တိုးမြှင့်မှုများကို ထောက်ခံအားပေးသည်။ ထို့အပြင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် ဖန်တီးမှုရှိစွာ လုပ်ကိုင်နိုင်သည့် အလုပ်ခွင်ကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့က ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ဂရုစိုက်ပါသည်
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်တော်သော စီမံခန့်ခွဲရေးကို လက်ကိုင်ပြုပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေး၊ သက်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေများနှင့် လက်အောက်ခံ နည်းဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်း စည်းမျဉ်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို လိုက်နာပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး၊ အရောင်း၊ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ လုပ်နင်းဆောင်တာ အားလုံးတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ရင်းမြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရေးကဲ့သို့ ရင်းမြစ်များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြုမှုတွင် ဦးဆောင်နေပါသည်။
လူအများ၏ ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကို အလေးထားပါသည်။
ဘေးကင်းရေး၊ သက်ဆိုင်ရာ အက်ဥပဒေများနှင့် လက်အောက်ခံ နည်းဥပဒေနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်း စည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ လိုက်နာပါသည်။ ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိသော အလုပ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးကာ ပေါ့ဆသော မတော်တဆမှုများကို တားဆီးပါသည်။
5. ကျွန်ုပ်တို့က လူမှုရေးအရ တာဝန်ယူမှုရှိသော ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသား ဖြစ်ပါသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်ငန်းစုနိုင်ငံသားအဖြစ် အခြေခံ တာဝန်များကို ယုံကြည်မှုရှိရှိဖြင့် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဒေသန္တရ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ အဖွဲ့အဝင်အဖြစ် ကုမ္ပဏီ၏ တာဝန်ယူမှုနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများတွင် ယုံကြည်မှု တိုးလာစေရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဘေးကင်းသော အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးမှုအတွက် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ပြီး အခွန်ပေးငွေများအတွက် တာဝန်ကို ရိုးသားစွာ နားလည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနှင့် ယှဉ်တွဲကြွယ်ဝမှုဆိုသည့် ဆက်ဆံရေးများကို တည်ဆောက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များနှင့် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုပေါ် အခြေခံ၍ လမ်းနှစ်သွယ် ဆက်ဆံရေးများကို ဖော်ဆောင်ပြီး ဗျူဟာမြောက်သော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖြစ် ၎င်းတို့ကို အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စုပေါင်းတိုးတက်ရေးကို စွဲကိုင်ထားပြီး ကျင့်ဝတ်ညီပြီး ဥပဒေနှင့်ညီသော ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိတ်ဖက်များ၏ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို အားကောင်းစေရန် ကြိုးပမ်းပါသည်။
လက်ရှိ လူမှုရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု လက္ခဏာများကို လေးစားပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်သော စီမံခန့်ခွဲရေး (အပြန်အလှယ် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု/ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု) ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့က ဒေသန္တရ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ ဥပဒေများ၊ အစဉ်အလာနှင့် တန်ဖိုးများကို လေးစားပြီး ဘဝအရည်အသွေး တိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင်ထောက်ပံ့ပါသည်။ အသိဉာဏဆိုင်ရာနှင့် အနုပညာဆိုင်ရာ လေ့လာမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားလှုပ်ရှားမှုများ၊ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် ကျန်းမာသော လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရေးကို မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအလုပ်၊ ကပ်ဘေးကယ်ဆယ်ရေး၊ အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့ လူမှုရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO များကို သိထားလိုက်ပါ
ㆍဒုဥက္ကဌနှင့် CEO [2018~လက်ရှိ]
ㆍဒုဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ စက်ဖြေရှင်းနည်းများ [2018~လက်ရှိ]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ စက်ဖြေရှင်းနည်းများ [2017~2018]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လုပ်ငန်း [2014~2017]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ သိုလှောင်ခန်း လုပ်ငန်း [2013~2014]
ㆍCEO၊ Samsung Display Co., Ltd. [2012~2013]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ Samsung အဆင့်မြင့်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် [2010~2012]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ [2018~လက်ရှိ]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ နေ့စဉ်သုံး အီလက်ထရွန်နစ် [2017~လက်ရှိ]
ㆍအကြီးအကဲ၊ အမြင်ဆိုင်ရာ ဖန်သားပြင် လုပ်ငန်း [2011~2017]
ㆍအကြီးအကဲ၊ ထုတ်ကုန် မဟာဗျူဟာ အဖွဲ့၊ အမြင်ဆိုင်ရာ ဖန်သားပြင် လုပ်ငန်း [2011~2011]
ㆍအကြီးအကဲ၊ R&D အဖွဲ့၊ အမြင်ဆိုင်ရာ ဖန်သားပြင် လုပ်ငန်း [2009~2011]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ IT နှင့် မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေးများ [2017~လက်ရှိ]
ㆍဥက္ကဌနှင့် အကြီးအကဲ၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း [2015~2019]
ㆍအကြီးအကဲ၊ မိုဘိုင်း R&D၊ မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း [2014~2015]
ㆍအကြီးအကဲ၊ နည်းပညာ မဟာဗျူဟာ အဖွဲ့၊ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း [2011~2014]
ㆍအကြီးအကဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၊ မိုဘိုင်း ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း [2007~2011]
Fortune Global ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ၊ Samsung။
အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းတွင် အောင်မြင်မှုရထားသည့် Samsung ကို နည်းပညာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဦးဆောင်သူအဖြစ် တစ်ကမ္ဘာလုံးကအသိအမှတ်ပြုထားပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ကုန်အမှတ်တံဆိပ် 10 အနက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် 2020 တွင် ထိပ်ဆုံးငါးခုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်
စမတ်စက်ရုံအစီအစဉ်ကဲ့သို့ CSR ပဏာမခြေလှမ်းများဖြင့် COVID-19 ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တိုက်ထုတ်ရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး ကိုရီးယားတွင် လူထုကုသမှုအဖြစ် လူသားရင်းမြစ် သင်တန်း အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်
6G စာရွက်ဖြူကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်
UNDP နှင့် လက်တွဲလုပ်ကိုင်၍ Generation17 အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်
စက်ရုံများမှ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့် Galaxy Z Flip နှင့် Galaxy Z Fold2 တို့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Samsung ၏ ပထမဆုံး 5G အပြည့် ထိပ်တန်းဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်သည့် Samsung Galaxy S20 စီးရီးကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
110” Samsung MICRO LED ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
ထိပ်တန်းအဆင့် စွမ်းအင် ချွေတာမှုဖြင့် AI သုံးထားသည့် အဝတ်လျှော်စက် အမျိုးအစားများကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်တွင် အော်ဒါဖြင့်ဖန်တီးသော အမျိုးအစားကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ဖြေရှင်းနည်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြုမှုကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဟွာဆောင်းမြို့တွင် EUV ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအသစ်တွင် အစုလိုက်ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ပြုံးတက်ခ်မြို့တွင် 16Gb LPDDR5 DRAM အသုတ်လိုက် ထုတ်လုပ်ခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 75 လက်မ MicroLED ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
AI အနာဂတ်အတွက် ‘Samsung Bot’ စက်ရုံပလတ်ဖောင်းများကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
CSR မျှော်မှန်းချက် အသစ်ဖြစ်သည့်- 'အနာဂတ်အတွက် အတူတကွ။ လူအများကို ထောက်ကူပေးခြင်း' ကို ကြေညာခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆိုင်းဘုတ်တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ဦးဆောင်သူဖြစ်နေသည်မှာ ဆယ်စုနှစ်ရှိပါပြီ
5G စမတ်ဖုန်း ‘Galaxy S10 5G ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်
EUV အခြေပြု 5nm လုပ်ငန်းစဉ် နည်းပညာ ဖန်တီးမှုကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်
2030 မတိုင်မီ အခြေခံတွက်ချက်မှုစနစ် ချစ်ပ် လုပ်ငန်းတွင် KRW 133 ထရီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် အစီအစဉ်များကို ကြေညာခဲ့သည်
ထိပ်တန်း စမတ်ဖုန်းများအတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 12Gb LPDDR5 မိုဘိုင်း DRAM အသုတ်လိုက်ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
စမတ်ဖုန်းများအတွက် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 108MP ပုံရိပ် အာရုံခံစနစ်ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သ
အသစ်စက်စက် မိုဘိုင်း အမျိုးအစားကို ဖန်တီးရင်း ‘Galaxy Fold’ ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်
စိတ်ကြိုက်အသုံးအဆောင်များ ခေတ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်ရင်း စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားသော ရေခဲသေတ္တာကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 8K HDR10+ TV များအတွက် ကြည့်ရှုစရာများကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်
နှစ် 50 မြောက် နှစ်ပတ်လည်ကို ဆင်နွှဲခဲ့သည်
ㆍကမ္ဘာ့ပထမဆုံး မော်ဂျုးလာ ‘The Wall’ နှင့် ‘QLED 8K’ TV တို့ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
Samsung နှင့် HARMAN တို့၏ ‘2018 Digital Cockpit’ ကိုပွဲထုတ်ပြသခဲ့သည်
နောက်ဆုံးပေါ် ခေတ်မီ EUV တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း ထုတ်ကုန် အမျိုးအစားကို ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဟွာဆောင်းမြို့တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်
'Galaxy S9/S9+' နှင့် 'Galaxy Note9' ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများအတွက် ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ‘3D ရုပ်ရှင် LED’ ကို ပွဲဦးထွက် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အသစ်တစ်ဖန်သုံးစွဲနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကာလ အလယ်အလတ်မှ ကာလရှည် ကမ္ဘာအနှံ့ တိုးချဲ့ ပြန့်ပွားရေး အစီအမံများကို ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ‘မျိုးဆက်ငါးခုမြောက် V-NAND’ ကို အလုံးအရင်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး '8GB LPDDR5 D-RAM' ကို တီထွင်ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်
စီးပွားရေးကို ပြန်လည်ရှင်သန်လာစေရန် နောက်လာမည့် သုံးနှစ်အတွင်း ကိုရီးယားဝမ် ထရီလီယံပေါင်း (KRW) 180 ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်နှင့် ဝန်ထမ်းပေါင်း 40,000 ခန့်အပ်ရန် ကြေညာခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AI (ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာ) စင်တာ ခုနစ်ခုကို ကိုရီးယား၊ ယူအက်စ်၊ ယူကေ၊ ကနေဒါနှင့် ရုရှားတွင် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5G ကွန်ရက် စီးပွားဖြစ်သုံး ကိရိယာတို့ကို ယူအက်စ် (FWA) နှင့် ကိုရီးယား (NR Mobile) ၌ ပေးသွင်းထောက်ပံ့ခဲ့သည်
HARMAN ကို ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ပြုံးတက်ခ်၌ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း စက်ရုံအသစ်တွင် အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှု စတင်ခဲ့သည်
ဒုတိယမျိုးဆက် 10nm FinFET လုပ်ငန်းစဉ် နည်းပညာ၏ အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့ပြီး EUV နည်းပညာဖြင့် 11nm LPP နှင့် 7nm LPP အသစ်တို့နှင့်အတူ အဆင့်မြှင့် သတ္တုပုံလောင်းစက်ရုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကို ထပ်လောင်းအားဖြည့်ခဲ့သည်
Galaxy S8၊ S8+ နှင့် Note8 တို့ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
QLED TV များနှင့် The Frame ကို ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်
Bixby အသံ စွမ်းရည်များကို ယခုအခါ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ နိုင်ငံပေါင်း 200 ကျော်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရုပ်ရှင် LED စခရင်ကို ပွဲဦးထွက်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
နိုင်ငံတကာ အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် 2017 တွင် နံပါတ်6ဖြစ်လာခဲ့သည်
HARMAN ကို ဝယ်ယူရန် အစီအစဉ်ကို ကြေညာခဲ့သည်
ရေရှည် ရှယ်ယာရှင် တန်ဖိုး ဖန်တီးမှုကို အဆင့်မြှင့်ရန် ပြီးပြည့်စုံသော လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို ကြေညာခဲ့သည်
Dacor၊ Joyent နှင့် Viv Labs တို့ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်
10 နာနိုမီတာ FinFET နည်းပညာဖြင့် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး ချစ်ပ်စနစ် အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
256 ဂစ်ဂါဘိုက် (GB) ဝင်ဆံ့မှုအထိ ပေးအပ်သည့် ဖယ်ရှားနိုင်သော ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ယူနီဗာဆယ် ဖလက်ရှ် သိုလှောင်ခန်း (UFS) မမ်မိုရီကတ် အမျိုးအစားကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်
Galaxy S7 နှင့် Galaxy S7 edge ကို ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့သည်
အသစ်ဆုံး လှိုင်းခွင်အမြင့် မမ်မိုရီ (HBM) အင်တာဖေ့စ်ကို အခြေခံ၍ ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံး DRAM အလုံးအရင် မိတ်ဆက်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ TV ဦးဆောင်မှု ဆယ်စုနှစ်အသစ်ကို စတင်ရန် အံ့မခန်းဖွယ်ရာ 2016 Quantum dot တီဗွိ အမျိုးအစားကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
10 နှစ် ဆက်တိုက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ TV စျေးကွက်တွင် နံပါတ် 1 နေရာကို ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 12Gb LPDDR4 မိုဘိုင်း DRAM အသုတ်လိုက်ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
လူအများ၏ အိပ်စက်မှုကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည့် တစ်ကိုယ်ရေ အိပ်စက်မှု စောင့်ကြည့်ကိရိယာ SleepSense ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
စွယ်စုံသုံးနိုင်သော စက်ဝိုင်းပုံစံနှင့် လှည့်နိုင်သည့် အနားဘောင်ပါသော စတိုင်ကျသည့် စမတ်နာရီ Gear S2 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 256Gb V-NAND ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီ အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
မိုဘိုင်းငွေပေးချေရေး ဝန်ဆောင်မှု Samsung Pay ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အမေရိကန်အခြေစိုက် LED ဖန်သားပြင်များ ထုတ်လုပ်သူ YESCO ကို ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ၎င်း၏ LED ဆိုင်းဘုတ်လုပ်ငန်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး နှက်ဖက် မှန်ကွေးနှင့်အတူ Galaxy S6 နှင့် Galaxy S6 Edge ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 14nm FinFET မိုဘိုင်း AP ကို ကြေညာခဲ့သည်
Interbrand ၏ ‘2014 ၏ အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ် 100’ အစီရင်ခံစာတွင်7ခုမြောက် ကမ္ဘာ့ တန်ဖိုးအရှိဆုံး အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်
3G ချိတ်ဆက်မှုပါသည့် ပထမဆုံး ဝတ်ဆင်နိုင်သော စက်ဖြစ်သည့် Gear S နှင့်အတူ မှန်ကွေးစခရင်ပါသည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စမတ်ဖုန်းဖြစ်သည့် Galaxy Note Edge ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
ယူအက်စ်အခြေစိုက် IoT (Internet of Things) ပလတ်ဖောင်း ရေးသားသူ SmartThings ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်
2020 အထိ အိုလံပစ်ကစားပွဲများအတွက် စပွန်ဆာပေးမှုကို တိုးချဲ့ရင်း Samsung ၏ IOC နှင့် သဘောတူညီချက်ကို သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း စက်ရုံအသစ်ကို Xi’an၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 105” မှန်ကွေး UHD TV ကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ ပထမဆုံး 20nm လုပ်ငန်းစဉ် နည်းပညာ (4Gb DDR3) ဖြင့် DRAM အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 85’’ မှန်ကွေး UHD TV ကို ပွဲထုတ်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင် Galaxy S4 ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 20 နာနိုမီတာ 4Gb အာလ်ထရာ မြန်နှုန်းမြင့် မိုဘိုင်း DRAM အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုး 32.9 ဘီလီယံဖြင့် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် 100 ကြားတွင် နံပါတ်9ချိတ်ခဲ့သည်
LCD လုပ်ငန်းကို Samsung Mobile Display သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်
7.5G LCD ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ Suzhou၊ တရုတ် ဆောက်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
IBM နှင့် မှတ်ပုံတင်မူပိုင် မျှဝေရေး လိုင်စင် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာ ကုမ္ပဏီ Medison ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်
ရောင်းချမှုတွင် #1 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အီလက်ထရွန်နစ် ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခဲ့သည်
20nm-အတန်းအစား၊ 64-ဂစ်ဂါဘစ် 3-bit NAND ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီကို အလုံးအရင်း ထုတ်ဝေမှု စတင်ခဲ့သည်
Samsung ဒစ်ဂျစ်တယ် ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်
Android OS နှင့် Galaxy စမတ်ဖုန်းစီးရီးများကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 40 နာနိုမီတာ DRAM ကို ဖန်တီးရေးသားခဲ့သည်
Samsung ၏ အမှတ်တံဆိပ်တန်ဖိုးသည် Interbrand ၏ 2010 အကောင်းဆုံး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှတ်တံဆိပ်များတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ် 19 အဆင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်
ရုရှားတွင် TV ထုတ်လုပ်ရေးစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
တရားဝင် အိုလံပစ် နည်းပညာ စပွန်ဆာ ဖြစ်လာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 40 နာနိုမီတာ 32Gb NAND ဖလက်ရှ်မမ်မိုရီ၊ 50 နာနိုမီတာ 1GB DRAM မမ်မိုရီကို တီထွင်ခဲ့သည်
မသန်စွမ်းကစားပွဲများ၏ တရားဝင် စပွန်ဆာ ဖြစ်လာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ TV စျေးကွက် ဝေစုတွင် #1 ဖြစ်လာခဲ့သည်
အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးအသစ် ချဲလ်ဆီး၏ တရားဝင်စပွန်ဆာ ဖြစ်လာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 50 နာနိုမီတာ 16Gb NAND ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီကို တီထွင်ခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ်ကို ဦးဆောင်ခြင်း
ဒစ်ဂျစ်တယ် ခေတ်သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွက် လုံးလုံးလျားလျား ပြောင်းလဲမှုနှင့် အခွင့်အလမ်းများ ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး Samsung Electronics သည် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများ၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြင့် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
LCD ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကို Tang jeong တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
စနစ် LSI R&D စင်တာကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်
TFT-LCD ပင်နယ်များကို ထုတ်လုပ်ရန် Sony နှင့်အတူ S-LCD ကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်
အော့တစ်ကယ် သိုလှောင်စက်များကို ထုတ်လုပ်ရန် TSST ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဆလိုဗက်ကီးယားတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီခွဲ SESK ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီတွင် ကမ္ဘာ့ #1 ဖြစ်လာခဲ့သည်
2002 တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် SGH-T100 မိုဘိုင်းဖုန်းအတွက် စုပေါင်းရောင်းအား အလုံးရေ 10 သန်းအထိ အောင်မြင်ခဲ့သည်
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် NAND ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီတွင် #1 ဖြစ်လာခဲ့ပြီး တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများတွင် #2 ဖြစ်လာခဲ့သည်
512Mb ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီ စက်များ၏ အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ရောင်စုံ TV များ စုစုပေါင်း အလုံးရေ သန်း 100 ကျော် ရောင်းအားအထိ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ် နယ်ပယ်ကို အဆင့်မြှင့်ခြင်း။
ကိုရီးယားလုပ်ငန်းအားလုံးနီးပါးကို ထိခိုက်ခဲ့သည့် 1997 ငွေကြေးကပ်ဘေးများ ရှိခဲ့သော်လည်း Samsung Electronics သည် ၎င်းတို့၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ကွန်ရက် နည်းပညာများတွင် ဦးဆောင်မှုနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်၊ ငွေကြေးနှင့် ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် မပြတ်အာရုံစိုက်မှုတို့ကြောင့် စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီအချို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 3D TFT-LCD မော်နီတာကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ကြိုးမဲ့အင်တာနက် ဖုန်း (စမတ်ဖုန်း) ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး MP3 မိုဘိုင်းဖုန်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ TFT-LCD စျေးကွက်တွင် ထိပ်တန်းဝေစု ရရှိခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် TV အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ဖန်သားပြင်အပြားပါသည့် TV ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
နာဂါနိုဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်တွင် အိုလံပစ်မိတ်ဖက်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 128 Synchronous DRAM နှင့် 128MB ဖလက်ရှ် မမ်မိုရီကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ကြိုူးမဲ့ဆက်သွယ်ရေး အမျိုးအစားတွင် ကမ္ဘာ့အိုလံပစ်မိတ်ဖက် (TOP) ဖြစ်လာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ပြီးပြည့်စုံသော 30" TFT-LCD ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
"စီမံခန့်ခွဲရေးအသစ်” ၏ ဒုတိယအဆင့်ကို ကြေညာခဲ့သည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အင်အားစု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
1990 ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းတွင် Samsung Electronics သည် အရည်အသွေး ဦးစားပေးရေးဆိုသည့် မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ထုတ်ကုန်များ ဖန်တီးရေး၊ သုံးစွဲသူ စိတ်ကျေနပ်မှု အလုံးစုံပေးရေးနှင့် ကောင်းမွန်သော ကော်ပိုရိတ် နိုင်ငံသားဖြစ်ရေးတို့ကို ရည်စူး၍ ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းကို သစ်လွင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယင်းကာလအတွင်း၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှ ကွန်ပျူတာ မော်နီတာများအထိ ထုတ်ကုန် 17 မျိုး၊ TFT-LCD များမှ ရောင်စုံရုပ်ပုံဖန်လုံးများက သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ဝေစုအတွက် ထိပ်တန်း ထုတ်ကုန်ငါးခု အဆင့်သို့ တက်လှမ်းခဲ့ပြီး အခြား 12 ခုက ၎င်းတို့၏ နယ်ပယ်များတွင် ထိပ်တန်း စျေးကွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရရှိခဲ့သည်။ နံပါတ် 1 ဖြစ်ခြင်းက အကြောင်းရင်းမှာ လူမှုဖူလုံရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုပွဲများ သို့မဟုတ် အားကစားများဖြစ်ပါစေ ကော်ပိုရိတ်လူမှု တာဝန်များ ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဟုလည်း အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ထိုသို့ဖြစ်လာစေရန် Samsung Electronics သည် အားကစား စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အထူးတလည် ကြိုးပမ်းကြောင့် ၎င်းတို့၏ ထိုအချိန်က ဥက္ကဌ Kun-hee Lee သည် နိုင်ငံတကာ အိုလံပစ်ကော်မတီ (IOC) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် 1996 ဇူလိုင်လတွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ကုမ္ပဏီပုံရိပ်အား ကမ္ဘာ့အားကစားလောကတွင် အဓိက ကူညီပေးသူအဖြစ် ကြီးများစွာ တိုးတက်လာစေခဲ့ပါသည်။
1G DRAM ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
64M DRAMs အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
Samsung အဆင့်မြင့်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (SAIT) က ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ MPEG-3 နည်းပညာကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 33" စခရင်နှစ်ခုပါ TV ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 256M DRAM ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးဖို သန်း 30 ကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာကမ္ဘာကြီးတွင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း။
"1990 အစောပိုင်းကာလများတွင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာ လုပ်ငန်းများအတွက် အလွန်တရာကြီးမားသော စိန်ခေါ်မှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စုစည်းပူးပေါင်းခြင်း တိုးတက်လာစဉ် ကုမ္ပဏီချင်းပေါင်းခြင်း၊ ယာယီပူးပေါင်းခြင်းနှင့် ရှယ်ယာဝယ်ခြင်းများတို့ အများအပြားရှိခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့ပေးအပ်နေသော နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန် ဖိအားများရှိခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံများနှင့် ကုမ္ပဏီအနှံ့အပြားကြား နယ်ပယ်အနှံ့သို့ စတင်စီးဆင်းလာခဲ့သည်။ Samsung Electronics သည် စျေးကွက်ဝယ်လိုအားများကို တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းရန် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းဗျူဟာကို ပြန်လည်အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါအခွင့်အလမ်းအများစုကို အသုံးချနိုင်ခဲ့သည်။"
Samsung အဆင့်မြင့်နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (SAIT) က ပထမဦးဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ် ဗီဒီယိုဒစ်ခ် ရိုက်ကူးစက် (DVD-R) ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
Samsung Group ကုမ္ပဏီ အထောက်အထားကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Samsung Group က "စီမံခန့်ခွဲရေးအသစ်" ကို ကြေညာခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 64M DRAM ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ရုပ် 10 သန်းကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
Samsung Electronics ၏ နည်းပညာအပေါ် တိုးမြှင့်၍ အလေးထားမှုက အီလက်ထရွန်နစ်၊ တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများ၊ အော့တစ်ကယ် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် နာနိုနည်းပညာမှ အဆင့်မြင့်ကွန်ရက်ဗိသုကာများအထိ နည်းပညာ ဆန်းသစ်မှုတွင် နယ်ပယ်အသစ်များသို့ တိုးချဲ့နိုင်စေသည့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (R&D) အသင်းအဖွဲ့နှစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်စေခဲ့သည်။ 1980 တွင် အဓိက သမိုင်းမှတ်တိုင်က Samsung Electronics နှင့် Samsung Semiconductor တို့ ပူးပေါင်းလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရောင်စုံ TV သန်း 20 ကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Samsung Semiconductor & Telecommunications Co. က Samsung Electronics နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်သည်။ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ပင်မလုပ်ငန်း အမျိုးအစားများအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့သည်
Samsung အဆင့်မြင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ် (SAIT) ကို R&D ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး၊ အပေါ့ဆုံး 4mm ဗီဒီယိုတိပ်ရိုက်ကူးစက်ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
ပထမဆုံး VCR များကို ယူအက်စ်သို့ တင်ပို့ခဲ့သည်
ကုမ္ပဏီအမည်ကို "Samsung Electronics Co. Ltd" သို့ ပြောင်းခဲ့သည်
ရောင်းအားက ဝမ် 1 ထရီလီယံကို ကျော်သွားခဲ့သည်
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများ (PCs) ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
Korea Telecommunications Co. ကို Samsung Semiconductor & Telecommunications Co. အဖြစ် အမည်ပြန်ပေးခဲ့သည်
အဖြူအမည်း TV 10 သန်းကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ပေါ်တူဂီတွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီခွဲကို တည်ထောင်ခဲ့သည်
တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်း လုပ်ငန်းကို Korea Electronics Information Co. သို့ အမည်ပေးခဲ့သည်
လေအေးပေးစက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို စတင်ခဲ့သည်
ဆူဝမ်တွင် R&D စင်တာကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Samsung Semiconductor Co. နှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်
Samsung Electronics ကို 1969 တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းက ကိုရီးယားစျေးကွက်တွင် နာမည်ကြီး ထုတ်လုပ်သူ လျင်မြန်စွာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကနဦး ကာလအတွင်း အိမ်သုံး အီလက်ထရွန်နစ် လုပ်ငန်းကို လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာစေခြင်းမှ တိုးတက်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်၍ တင်ပို့ခဲ့သည်။ Samsung Electronics သည် ကိုရီးယား တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းတွင် 50 ရာခိုင်နှုန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ ရရှိခဲ့နောက် တစ်ပိုင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဦးဆောင်သူအဖြစ် Samsung Electronics ၏ နေရာကို ပိုခိုင်မာလာစေခဲ့သည်။
မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် မီးခိုများ အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှု စတင်ခဲ့သည်
VHS VCRs ကို ဖန်တီးခဲ့သည်
Korea Electronics Information Co. ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်
အဖြူအမည်း TV4သန်းကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည် (ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံး ဖြစ်သည်)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားရုံးခန်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် (SEA)
ရောင်စုံ TVs တင်ပို့မှုကို စတင်ခဲ့သည်
ရောင်စုံ TVs အလုံးအရင်း ထုတ်လုပ်မှုကို စတင်ခဲ့သည်
Korea Semiconductor Co. ကို ဝယ်ယူခဲ့သည်
အဖြူအမည်း TV 1 သန်းကျော် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ တတိယ 'အမြန်စတင်မှု' စနစ် TV (ထုတ်ကုန်အမည်- Econo TV) ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်
အဝတ်လျှော်စက်နှင့် ရေခဲသေတ္တာ ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက် အဖြူအမည်း ရုပ်မြင်သံကြားစက် ထုတ်လုပ်ရေးကို စတင်ခဲ့သည်
အဖြူအမည်း TV များကို ပနားမားသို့ စတင်တင်ပို့ခဲ့သည်
အဖြူအမည်း TV (မော်ဒယ်- P-3202) ထုတ်လုပ်ရေးကို Samsung-Sanyo က စတင်ခဲ့သည်
Samsung-Sanyo Electronics ကို တည်ထောင်ခဲ့သည် (မတ်လ 1975 တွင် Samsung Electro-Mechanics ဟု အမည်ပြောင်းခဲ့ပြီး မတ်လ 1977 တွင် Samsung Electronics နှင့် ပေါင်းစည်းခဲ့သည်)
"Samsung Electronics Industry Co Ltd. ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်